Zimbabwe | The Daily Star
Bangladesh Cricket Board (BCB) announces a 12-member BCB XI squad for the three-day practice match against Zimbabwe scheduled for October 29-31.
President Robert Mugabe is under house arrest in Zimbabwe, South African President Jacob Zuma said in a statement today after the Zimbabwean military appeared to have taken control of the country, AFP reports.
Kraigg Brathwaite's unbeaten half-century solidify the West Indies' advantage over Zimbabwe on the third morning of the first Test at Queens Sports Club.
Dhaka Dynamites rope in Cremer
Zimbabwe captain Graeme Cremer joins Bangladesh Premier League (BPL) defending champions Dhaka Dynamites after his recent performances caught the attention of the BPL franchise.
Tarisai Musakanda hit 60 as Zimbabwe kept their five-match ODI series alive with a three-run win over Afghanistan in Harare on Tuesday.
Sri Lanka thrash Zim
A change of format could not bring a change in fortunes for Zimbabwe, as Sri Lanka thrashed them by eight wickets in the first match of a one-day international triangular series at Harare Sports Club on Monday.
SL romp to 8-wicket victory against Zim
Opener Dhananjaya de Silva struck an unbeaten 78 to help Sri Lanka beat Zimbabwe by eight wickets on Monday in the opening match of the triangular one-day tournament that also features West Indies.
Zim solid after SL run spree
De Silva ton drives SL
Dhananjaya de Silva scored his second Test century to put Sri Lanka in control of the second and final Test against Zimbabwe after the first day at Harare Sports Club on Sunday.
Cremer hits maiden ton
Graeme Cremer struck his maiden Test century but the Zimbabwe captain's gritty knock could not prevent his side from closing day three of the first Test against Sri Lanka with a massive deficit.
NZ sweep series
Leg-spinner Ish Sodhi finishes with seven wickets in the match as New Zealand wrap up a 254-run victory over Zimbabwe.
Kiwis edge closer to thumping win
Ross Taylor and BJ Watling score centuries as New Zealand close in on victory against hapless Zimbabwe after day three of the first Test.
Kiwis stamp their authority
Tom Latham's century and 91 from Kane Williamson put New Zealand firmly in the driving seat with a 151-run lead over Zimbabwe on the second day of the first Test on Friday.
Wagner rocks Zimbabwe
Left-arm seamer Neil Wagner's raw pace and aggression proves too much for an out-of-touch Zimbabwean batting lineup.
Cremer named Zim captain
Zimbabwe appoint Graeme Cremer as captain of a 16-man squad named on Thursday for the two-Test series against New Zealand starting next week.
Test cricket's newest nations are in despair at plans to split the format into two divisions, fearing it could undo decades of hard-fought progress on the field and kill interest in the game.
Elephant shot in forehead seeks aid when help arrives
An injured elephant in Zimbabwe motions for assistance when help arrives after it wandered around a park for weeks with a massive gunshot wound on its head.
Mandeep Singh blasts a quick-fire unbeaten half-century as India crush Zimbabwe by 10 wickets to level the Twenty20 series on Monday.
Indian cricketers not involved in alleged rape
Two Indian nationals have been arrested in Harare after being accused of rape, but reports that they are members of the Indian cricket team are incorrect, officials in Zimbabwe confirmed Sunday.
Indian cricketers not involved: Zimbabwe police
Indian cricketer arrested for rape in Zimbabwe
An unnamed Indian cricketer was arrested on Friday for allegedly raping a local woman in Harare, Zimbabwe.
Zimbabwe stun India
The shorter the contest, the tighter the contest. Zimbabwe, outclassed in all three ODIs, pull off their second successive 20-over win over India.
Rahul ton lifts India
Jasprit Bumrah leads the way with four wickets before KL Rahul marks his one-day international debut with an unbeaten century to take India to a nine-wicket victory over Zimbabwe.
Afghans romp into the Super Ten
Afghanistan qualify for the Super Ten phase of ICC WT20 2016 on the back of a 59-run win over Zimbabwe at Nagpur stadium under the lights.